Posted by ကို Tranquillus | စက်တင်ဘာ 30, 2018 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
အီးမေးလ်လက်မှတ်သည် များသောအားဖြင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းပေးသည့်ဆိုက်သို့ လင့်ခ်တစ်ခုပါ၀င်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အထောက်အထားနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကိုးကားချက်များကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ၎င်းကို မကြာခဏ တည်ထောင်ထားသည်။ အီးမေးလ်လက်မှတ်သည် B မှ B စကြာဝဠာတွင် ပို၍ရှိနေသည် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်များတွင် ရှေ့တန်းတင်သည့်နေရာရှိနေဆဲဖြစ်သည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအကြား ဖလှယ်မှုများတွင် ပိုတွေ့ရသည်။ အီးမေးလ်တစ်ခုစီ၏အဆုံးတွင် အီးမေးလ်လက်မှတ်ကို ထည့်သွင်းထားပြီး အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူများသည် ၎င်းတို့၏အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်နှင့် ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်ကို ဖလှယ်နိုင်သည်။ အီးမေးလ်လက်မှတ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည် အမြဲတမ်းလွယ်ကူသည်မဟုတ်ပါ၊ အထူးသဖြင့် သင်၏လက်မှတ်ကိုသရုပ်ဖော်လိုပါက သို့မဟုတ် လင့်ခ်များကိုပေါင်းစပ်လိုပါက HTML ကုဒ်၏အချို့သောအယူအဆများကို ကျွမ်းကျင်ရပါမည်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကြိုက် လက်မှတ်ကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ ဝဘ်ပေါ်မှာ ကိရိယာတွေ ရှိပါတယ်။ ဤသည်မှာ အီးမေးလ်လက်မှတ်ကို အွန်လိုင်းတွင် ဖန်တီးနည်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည်။
ယင်းကိုစတင်ရန် အီးမေးလ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးစသည်တို့ကိုသင့်အမည်, သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့်သင့်အနေအထား, ဖုန်းနံပါတ်, က်ဘ်ဆိုက်ကဲ့သို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ဒီခြေလှမ်းပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏သရုပျဖျောဖို့သင့်ကုမ္ပဏီ၏လိုဂိုအတူလိုက်ပါ, သင်တို့ဓာတ်ပုံထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်အီးမေးလ်ကလက်မှတ်ဒီဇိုင်း။ ထိုအခါကစတာတွေက Facebook, Twitter Instagram ကို, Google+ မှာ, LinkedIn တို့ကဲ့သို့သောသင်၏လူမှုကွန်ယက်မှလင့်များထည့်သွင်းဖို့လည်းဖြစ်နိုင်
ထို့ကြောင့်သင်၏ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်သင်၏မြင်သာမှုကိုတိုးတက်လာလိမ့်မည်။ ဤပဏာမအဆင့်များပြီးသည်နှင့်သင်၏ဖန်တီးရန်အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည် Professional ကအီးမေးလ်လက်မှတ် တိုင်းတာ။ အများအပြားကတင်းပလိတ်များသင့်ရဲ့ preference ကိုရပါလိမ့်မယ်သင်အရွယ်အစား, ဖော, စာသားအရောင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အရောင်များလူမှုရေး icon တွေကိုပြောင်းလဲနေတဲ့နေဖြင့်စိတ်ကြိုက်နိုငျသောဖြေရှင်းချက်ပေါ် မူတည်. ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ဖန်တီးဖို့ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဂျီမေးလ်အတွက်အီလက်ထရွန်နစ်လက်မှတ် သင်တစ်ဦးကို PC, စမတ်ဖုန်း, Android နဲ့ iOS tablet ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ရှိမရှိ။ PC ကွန်ပျူတာတွင်ရုံပွင့်လင်း Gmail နဲ့ညာဘက်ထိပ်မှာရှိ "Settings" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ setting တွင်သင်သည်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တွင်သင်၏လက်မှတ်ကိုထည့်သွင်းရန်နှင့်တည်းဖြတ်နိုင်သည်,a"ကိုလက်မှတ်" အပိုင်းများနှင့်ကလစ် နှိပ်. ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတာနဲ့လက်စသတ်, သင်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင် "မှတ်ပုံတင်မည်" ပေါ်တွင် click လုပ်နှင့်သင့်လက်မှတ်မှပြောင်းလဲမှုများကို save ဖို့ရှိသည်။ စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet, သင်ပထမဦးဆုံး Gmail ကိုလျှောက်လွှာများ သူတို့ရဲ့အကောင့်တစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်ကိုလက်မှတ် add.
မေးလ်ဆာဗာကိုကွဲပြားခြားနားသည်သင်၏လက်မှတ်အနက်ကိုဘော်ပြလိမ့်မည်နှင့်တစ်ဦးကို attachment တစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံအဖြစ်လည်းကောင်းထင်ရှားစေခြင်းငှါ မှလွဲ. သင်က iOS ထုတ်ကုန်အပေါ်အတိအကျတူညီပြုလိမ့်မည်။ သင့် Mac သို့မဟုတ်အခြား iOS devices တွေကိုသင့်ရဲ့အကောင့်ကို iCloud Drive ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးနေတယ်ဆိုရင်, သင့်လက်မှတ်ကိုအလိုအလျောက်အားလုံးချိတ်ဆက်ကိရိယာများပေါ်တွင် updated နှင့်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအီးမေးလ်ဖြင့်အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုး PDF files တွေကိုပေးပို့ဖို့ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
Outlook နဲ့အတူအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ် Creating
Outlook ဖြင့်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်၊ တစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော လက်မှတ်များကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး အီးမေးလ်စာတစ်ခုစီအတွက် ၎င်းတို့ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သင့်တွင် Outlook ၏ ဂန္ထဝင်ဗားရှင်းရှိပါက၊ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဖိုင်မီနူးကို ဖြည့်သွင်းပြီး "Options" ကို ရွေးချယ်ပါ။ ဤကဏ္ဍတွင် "မေးလ်" ကိုနှိပ်ပြီး "လက်မှတ်များ" ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤအဆင့်တွင်၊ သင့်တွင် အီးမေးလ်အကောင့်များစွာရှိလျှင် သီးခြားအီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် စတင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ကျန်သည်မှာ အခြေခံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း အချက်အလက်ဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ခက်ခဲသောအပိုင်းသည် ရရှိနိုင်သော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုရွေးချယ်စရာများစွာမှ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျက HTML ပေါ် Outlook ကိုသုံးလျှင်, task ကိုတစ်ဦးဂန္ဗားရှင်းနဲ့ထက်ပိုပြီးခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ အတွက် အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့လက်မှတ်မေးလ်ဖန်တီး HTML ကိုအတူသင်တို့ Microsoft Word သို့မဟုတ်ဝဘ်အယ်ဒီတာသုံးစွဲဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်သည့်အခါပုံဥပမာကိုမပုံရိပ်ကိုပိုမိုထိရောက်ပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်၌, သင်အခြေခံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာခြင်းနှင့်အဆုံး၌, ငါတို့က HTML format နဲ့စာရွက်စာတမ်းကယ်ဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ သို့သော်ပြဿနာများသမ်မာကမျြးသုံးပြီးအထူးသဖြင့်လာသောအခါဤနည်းလမ်းနှင့်အတူမှန်မှန်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
ပူးတွဲဖိုင်အနေနဲ့ပေါ်လာသောပုံရိပ်သို့မဟုတ်လိုဂို၏ပြဿနာကိုကုစားဖို့, အဖြေတစ်ခု HTML code တွေဟာပြုပြင်မွမ်းမံ၏အကြောင်း, လိုအပ်ပါသည်။ ဒီအောင်မြင်ရန်ကျနော်တို့သရုပ်ဖော် image ကိုပေးပို့မရှိစေရေးအတွက်ဒေသခံပုံရိပ် URL ကိုလမ်းကြောင်းအားအစားထိုးရမယ် အီးမေးလ်ကလက်မှတ်ရေးထိုး ပူးတွဲဖိုင်တစ်ခုအနေနှင့်လည်းသင်၏အီးမေးလ်များအားလုံး၊ သင်ပေးပို့ပြီးသောသူများနှင့်ပင်သင်၏လက်မှတ်ကိုကိုက်ညီစေရန်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုသည် ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ HTML ဖိုင်ကို directory တစ်ခုထဲသို့ကူးယူခြင်းဖြင့်ပြီးဆုံးသည်။ (Windows7တွင်မေးခွန်းနံပါတ်သည် C: \_ Users
လွယ်ကူပြီးအခမဲ့သည်သူ၏အီးမေးလ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲဖန်တီးရန် tools များ
သူတို့ရဲ့အကောင့်တစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်ကိုလက်မှတ် Add သငျသညျအဘယ်သူမျှမက HTML အယူအဆရှိတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်လွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ပေ။ ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူမယ့်အခမဲ့အီးမေးလ်လက်မှတ်ထုတ်လုပ်ဖို့အွန်လိုင်းမှ tool ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်စေရန်တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အများအပြားက tools တွေကို MySignature အပါအဝင်ယနေ့အထိစာရင်းနေကြသည်။ ဒီ tool ကကြီးမားတဲ့တင်းပလိတ်များအရေအတွက်အပေါင်းတို့နှင့်အသက်မွေးဝမ်းအဘို့လျောက်ပတ်ပါတယ်။ ဒါဟာအတွက်အခြေခံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှိပါတယ် Professional ကအီးမေးလ်လက်မှတ် စသည်တို့ကိုဖြည့်စွက်အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်, လူမှုကွန်ယက်များ, လိုဂိုအပါအဝင်
ထိုမှတပါး, MySignature သငျသညျလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ယင်း၏အကောင့်များ၏ icon များထည့်နိုင်သည်တစ်ခြေရာခံခြင်း link ကိုရှိပါတယ်။ ဒီ link မှတဆင့်တဦးတည်းဤသို့လက်မှတ်မှတစ်ဆင့်ထုတ်ပေးကလစ်၏နံပါတ်ကိုသိနိုငျသညျ။ ဒီ tool ကစသည်တို့ကို Gmail ကို, Outlook, Apple ကမေးလ်, များအတွက်လက်မှတ်ဖန်တီး အသုံးပြုမှုအောင်မြင်ရန်နှင့် လက်မှတ်ဖန်တီးအွန်လိုင်းအီးမေးလ်ပို့သူက၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားနှင့် "အခမဲ့အီးမေးလ်လက်မှတ် Create" ပေါ်တွင် click လုပ်ရပါမည်။ သငျသညျနှစျခုလက်မှတ်ပေါင်းအတွက်နည်းလမ်းများ, အော်တိုနှင့်တစ်ကို manual နဲ့စာမကျြနှာကိုညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါအလိုအလျောက်နည်းလမ်းကိုသူတို့ရဲ့ Facebook သို့မဟုတ် LinkedIn တို့အကောင့်ကို အသုံးပြု. ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုသမားရိုးကျလက်စွဲစာအုပ်နည်းလမ်းကိုဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အစီစဉ်ပေးသည့်နေရာများဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုသည်သင်ဒေတာကိုမှတ်တမ်းတင်ရှေ့၌သင်တို့လက်မှတ် preview နိုင်စွမ်းရှိသည်။ စစ်ဆင်ရေးလွယ်ကူသည်နှင့်5မိနစ်ထက်မပိုကြာပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, MySignature ၏အသုံးပြုမှုကိုအခမဲ့နှင့်မျှမမှတ်ပုံတင်ရေးလိုအပ်သည်။ ဂျီမေးလ်သို့မဟုတ် Outlook ကဲ့သို့အအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုကြသောသူတို့အဘို့, HTML code တွေဟာရရှိနိုင်ပါသည်။
အလားတူ MySignature ဖို့လည်းသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်အရာသည်အခြား tool ကိုကျနော်တို့ Zippisig အဖြစ် မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအွန်လိုင်းအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ဖန်တီး။ Zippisig (လိုဂိုနဲ့လူမှုကွန်ရက် profile များကိုများ၏ icon တွေကိုထည့်သွင်း, သတင်းအချက်အလက် may) က၎င်း၏လက်မှတ်ကိုဖန်တီးရန်သူအပေါင်းတို့ကိုအခြေခံအင်္ဂါရပ်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါခြားနားချက်ကတစ်ပါတ်အဘို့ကိုသာအခမဲ့ဖြစ်ပြီးဤကာလအတွင်းကျော်လွန်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအခမဲ့မပေးကြောင်းကိုဖြစ်ခြင်း။
သို့မဟုတ်ပါက Si.gnatu.re တွင်အလွန်ပြည့်စုံပြီးအီးမေးလ်လက်မှတ်ကိုအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်ပြီးသင်ဆန္ဒအလျောက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်ပြီးဖောင့်၊ အရောင်များ၊ လူမှုကွန်ယက်ပရိုဖိုင်းများ၏အိုင်ကွန်များ၏အရွယ်အစား၊ ရုပ်ပုံ၏အနေအထားသို့မဟုတ်လိုဂိုနှင့်စာသားများ၏ချိန်ညှိချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဒီကိရိယာရဲ့အားသာချက်ကတော့လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အတော်များများရဲ့ကိုးကားချက်ဖြစ်ပြီး၊ သင့်ရဲ့အကောင့်ဆီကိုအဆက်အသွယ်တွေကိုလွယ်ကူစွာပြန်ပို့ပေးတယ်။
လက်မှတသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုဆက်ဆက်အရိုးရှင်းဆုံးကအီးမေးလ်လက်မှတ်ပေါင်းဖန်ဆင်းခြင်း tool တစ်ခုဖြစ်သည်လည်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာသုံးစွဲဖို့မှတ်ပုံတင်ရန်မဖြစ်မနေမရဖြစ်ပြီးလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ cons အသုံးပြုပုံကြောင့်ဒီဇိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌နည်းနည်းကန့်သတ်သည်ကတစ်ခုတည်း type ကိုအဆိုတင်သွင်း။ ဒါပေမဲ့ဒီတစျခုကအရမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်တပြိုင်နက်က HTML ကုဒ်သင့်ရဲ့ပို့စ်များအတွက်ကြောင့်ပေါင်းစပ်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
က Firefox ရဲ့ extension ကြောင့် WiseStamp အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာခွင့်ပြု အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့လက်မှတ်မေးလ်ဖန်တီး သငျသညျမျိုးစုံအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုစီမံခန့်ခွဲလျှင်အားလုံးသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများ (ဂျီမေးလ်, Outlook, Yahoo စတာတွေ) အတွက်ဒီတော့ဒီအကြံပြုကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ WiseStamp ကိုအသုံးနိုင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အပြည့်အဝသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်လက်မှတ်ပေါင်း customize။ အခြေခံန်ဆောင်မှုအပြင်, ဒီ tool ကိုတောင်သင်တစ်ဦးဘလော့ရှိပါကသင့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်သည့်, သူ့လက်မှတ်အတွက် RSS feed ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစတစ်ကိုးကားထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ်တစ်ယူကျု့ဗီဒီယိုကိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။ အဆိုပါ extension ကိုပင်သူတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာများအသီးအသီးအဘို့အမျိုးစုံလက်မှတ်ပေါင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
HubSpot ၏အီးမေးလ်လက်မှတ်မီးစက်ကိုလည်းထုတ်လုပ်ဖို့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ် Professional ကအီးမေးလ်လက်မှတ်။ ဒါဟာခေတ်မီကြော့နဲ့ရိုးရိုးဖြစ်ခြင်း၏အားသာချက်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီဇိုင်းကိုကမ်းလှမ်းချောမွေ့ပြောင်လက်အလွယ်တကူအားလုံးအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်မီးစက်သင့်ရဲ့အဖြူရောင်စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်သင့်သတင်းလွှာတက်သည်လက်မှတ်ထိုးရန်သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုအားပေးဖို့ဖုန်းခေါ်-to-action ကိုအတွက်အားသာချက်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီ tool ကိုလက်မှတ်ထည့်သွင်းဖို့လက်မှတ်တံဆိပ်များပေးထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့သည်လည်း, ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအီးမေးလ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်စေသည်အခြား tool ကိုစကားပွောနိုငျ အခမဲ့အီးမေးလ်လက်မှတ်ထိုး။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောအခြေခံဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း အွန်လိုင်းအီးမေးလ်လက်မှတ်ဖန်တီး။ သငျသညျဓါတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်လိုဂိုပေါင်းစည်းဖို့နဲ့လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်တစ်ဦးရှိနေခြင်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမလိုချင်ကြဘူးလျှင်သုံးပါ။
ဘယ်လိုလွယ်ကူစွာအွန်လိုင်းအီးမေးလ်လက်မှတ်ပေါင်းဖန်တီးရန်နှင့်အခမဲ့ စက်တင်ဘာလ 21st, 2018Tranquillus
အောက်ပါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတည်းဖြတ် Software များရင်းနှီးစွာ Pro ကိုစာလုံးပေါင်း။